Khariidadda Huawei: Adeegga khariidadda Huawei wuxuu rasmi noqon doonaa 2019 | Androidsis
Toddobaadkii hore waa la siiyay bilaw shirweynaha horumarinta ee Huawei. Dhacdadan, maalintii la furay, nooca Shiinaha ayaa nooga tagay laba sheeko oo muhiim ah: EMUI 10 iyo iyada HarmonyOS nidaam hawlgal u gaar ah. Nooca Shiinaha ayaa sii wadaya inuu ku dhawaaqo warka dhacdadan tan xigtana waxay noqon doontaa Huawei MapKit, oo ah adeeg khariidadeed u gaar ah.
Huawei MapKit waxaa loo arki karaa nooc Khariidadaha Google ah, laakiin kiiskan ka socda Huawei, inkasta oo ayan iyagu doonaynin inay la tartamaan adeeggan. Shirkadda ayaa horay u shaacisay in soo bandhigisteeda ay dhici doonto bisha Oktoobar ee sanadkan. Waxay durbaba ufurayaan meheradaha adeeggan kuwa soosaarayaasha ah si ay uga shaqeeyaan, sida ay shaaciyeen.
Sumadda Shiinaha ayaa dooneysa inay raacdo tallaabooyinka shirkadaha sida Apple, Google ama Microsoft, kuwaasoo hadda leh adeegyadooda khariidado u gaar ah. In kasta oo ay taasi macnaheedu ahayn in summaddu ay bilaabi doonto codsigeeda, sidaas darteed maahan inay macnaheedu tahay inay abuurayaan qof kula tartamaya Khariidadaha Google arrintan la xiriira. Ugu yaraan xilligan waxba lagama sheegin qorshayaashan suurtagalka ah ee shirkadda.
Iyadoo Huawei MapKit, waxa ay shirkaddu qabato waa samee qalab iyo koodh ay heli karaan horumariyeyaasha adeegga khariidadaada. Sidan oo kale, waxay noqon doontaa suurtagal in lagu dhex daro codsiyada ama shabakada horumariyeyaasha la sheegay. Fikradda astaanta ayaa ah in la helo beddel ka mid ah nidaamyada hadda jira ee la heli karo. Marka tani waxay ka caawin kartaa iyaga mustaqbalka inay yeeshaan codsi khariidad u gaar ah, haddii ay rabaan, laakiin taasi maahan inay sabab u ahaato dareenkan.
Sida la ogyahay ilaa hadda, Huawei MapKit waxaa laga bilaabi doonaa in ka badan 150 dal oo kala duwan. Intaas waxaa sii dheer, waxay taageero u heli doontaa in ka badan 40 luqadood, taas oo shaki la'aan u oggolaaneysa adeeggan ballaaran. Soo-saareyaasha adeegsada waxay lahaan doonaan hawlo badan oo la heli karo. Waxay awoodi doonaan inay jaangooyaan khariidadaha, ku dar calaamado, isku daraan xaqiiqda la kordhiyay, abuuraan qorshooyinka wadada iyo waxyaabo kale oo badan. Kuwani waa hawlo aan horay u ogaanay mahadsanid adeegyada kale ee khariidada.
Waxay u muuqataa taas waxaa jira dhowr shirkadood oo adduunka ah kuwaas oo xiiseynaya la shaqeynta soo saaraha Shiinaha ee arimahan. Sida laga soo xigtay xog cusub, Yandez (shirkadda ugu weyn ee tiknoolajiyadda Ruushka) iyo Booking Holdings (shirkadda ka dambeysa Booking.com) ayaa durbaba wadahadalo la leh shirkadda si ay uga adeegsadaan Huawei MapKit barnaamijyadooda. In kasta oo xilligan aynaan garanayn gobolka ay ku sugan yihiin wada-hadalladan ay kula jiraan shirkadahaas. Maxaa hubaal ah in toddobaadyadan ay soo bixi doonaan magacyo cusub oo waliba muujinaya xiisaha ay u qabaan arimahan. Marka waan arki doonaa waxa shirkadaha kale ay muujiyaan xiisaha ay u qabaan arrintan.
Sumadda Shiinaha ayaa sidaa leh horeba waxay saldhigyo isgaarsiineed ugu leeyihiin in ka badan 160 waddan. Tani waa wax durba iyaga siinaya suurtogalnimada inay ku siiyaan macluumaad dhammaystiran xogta meelaynta dayax-gacmeedka. Tani waxay noo cadaynaysaa inay u diyaar garoobeen arrintan. Shirkadda ayaa faallo ka bixisay in soo jeedintan cusub si rasmi ah loogu furi doono horumariyeyaasha dhammaadka sanadka. Waxaa macquul ah Oktoobar, ama Oktoobar kadib, ma jiraan taariikhyo cayiman hadda. Marka bilaha soo socda waxaan arki doonaa soo jeedinta shirkadahaan arimahan.
Waxaan dheg u noqon doonnaa wararka cusub ee ku saabsan Huawei MapKit toddobaadyada soo socda. Tan iyo markii ay ku dhawaaqistani timaaddo wax yar uun ka dib markii magaca Shiinaha uu nooga tagayo nidaamkiisa hawlgalka u gaarka ah. Waan arki karnaa sida shirkaddu u raadineyso inay ku tiirsanaato wax ka yar shirkadaha kale, gaar ahaan shirkadaha Mareykanka, markay tahay inay yeeshaan adeegyo gaar ah. Markaa waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko habka adeegan loogu dhex dari doono adeegyada, codsiyada ama bogagga shabakadaha shirkadaha kale, iyadoo la arkayo inay hore u jireen dhinacyo daneynaya. Sideed u aragtaa go'aankan ay shirkaddu ku abuurtay adeeg khariidad u gaar ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Huawei MapKit: Adeegga khariidadda astaanta
HTC Wildfire X: Taleefanka cusub ee sumadda